ပင်တိုင်ကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 795
မိန်းမသားနဲ့ ရဲသား ဓာတ်ပုံ မောင်စွမ်းရည်၊ စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ အမှန်တရားက မိန်းမသားကို အားဖြစ်စေအံ့။ မိန်းမတယောက် လက်ညိုးငေါက်ငေါက် ခါးကိုထောက်လျက် မကြောက်မရွံ့ နောက်မတွန့်ဘဲ အံကိုခဲ၍ ရဲကို အာခံ သည်အားမာန်ဟာ သူ့ထံ ဘယ်လို ရောက်သလဲ။ အမှန်တရားက မိန်းမသားကို အားဖြစ်စေပြီ။ လယ်သမားက ရွှေသားမလို၊ ကြေးပြားမလို မြေကိ်ုပေးပါ မြေသာ ဘ၀ မြေက ဆီဆန် ရာသက်ပန်ပဲ ကျည်ဆံမလို ဆီ ဆန်လိုတယ် မြေကို မသိမ်းကြပါနဲ့။ ကြေးနီတောင်ကို သင်တို့ဖြိုလို့ ပြိုချင်လည်း ပြို လူကိုဖြိုလို့ ပြိုမကျနိုင်။ ကြေးနီတောင်က ကြေးတွေရလို့ ကြေးက ငွေဖြစ်၊ စိန်ရွေှ့ဖြစ်လည်း စစ်ဗိုလ်မယား နိုင်ငံခြားမှာ ကားစီး တုိုက်ဝယ်...
ကမာပုလဲ စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂ ဘူးလုံးနားမထွင်း ဆံနွယ်များ မျက်ကန်း ဆံသ ဆရာရဲ့ ခွဲစိပ်ကုသမှုမှာ ငယ်မူတွေ အဖြတ်လိုက် အဖြတ်လိုက် ကျဆင်းခဲ့ …။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် … လှတယ်ထင်ရင် ပြီးတာပါပဲ သွေးနထင်ရောက်မှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ဦးခေါင်းကိုယ် ပြန်နင်းကြပုံ။ ။ No tags for this post.
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂ ၇ – ၉ – ၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ စံတော်ချိန် ၁၆း၃ဝ နာရီ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ စံတော်ချိန် (၆းဝဝ) နာရီအချိန် ကျွန်တော့် ထံသို့ရောက်ရှိလာသော အီးမေးလ်စာတစ်စောင်ကြောင့် ကျွန်တော်အထူး တုန်လှုပ်သွားခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ယင်းနေ့တွင် နာရေးကူညီမှု အသင်း (ရန်ကုန်) တွင် နာရေးကူညီမှု ဈာပနလမ်းကြောင်းမှာ စံချိန်သစ်တင်သွားခဲ့ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယခုလို မိုးရာသီ အေးမြသော အချိန်ကာလများတွင် ယခင့်ယခင်နှစ်များစွာက ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားသူဦးရေသည် တစ်နေ့လျှင် ပျှမ်းမျှအားဖြင့် (၄ဝ) ဦးရေမှ (၄၅) ဦးရေခန့်သာရှိခဲ့သည်။ ပူပြင်းလှသောနွေရာသီအချိန်ကာလများတွင် သေဆုံးသူဦးရေအားဖြင့်...
ပိတောက်လမ်း ဆိုရအောင် – ၂ မာမာအေး စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ (အသံဖိုင်) သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ No tags for this post.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – လွှတ်တော်မှာ လောင်တဲ့မီး
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – လွှတ်တော်မှာ လောင်တဲ့မီး စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
တူမောင်ညို (၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) ကြေးမုံသတင်းစာ (၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) စာမျက်နှာ ၈ ဒီသတင်းမှာ လူသတ်တဲ့ မိန်းကလေး မမေဇွန် (ခ) မျိုးဇာနည်ဇွန်နဲ့ အသတ်ခံသူ မိန်းကလေး မနုနုလွင် တို့ အသက်အရွယ် အားဖြင့် ငယ်ရွယ်သူလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ – လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ မမေဇွန် (ခ) မျိုးဇာနည်ဇွန် ဟာ အသက် (၂၁) နှစ်။ – ညှင်းဆဲ အသတ်ခံသူ မနုနုလွင် အသက် (၁၈) နှစ် အသက်အရွယ်အားဖြင့် မတိမ်းမယိမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့အိမ်ရှင်တွေက အိမ်ဖော်(အမျိုးသမီး/အမျိုးသား/ ကလေးငယ်တွေအပေါ်) တွေအပေါ် နိုင့်ထက်ကလူပြု ညှင်းဆဲ နှိပ် စက်မှုတွေ ဘာကြောင့်များ မကြာခဏ အခုလို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပေါ်ပေါက် ဖြစ်ပွားနေရတာလဲ။“ဒေါသအလျောက်...
ဖိုးထက် စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၂ ကိုသင်းမြိုင်တို့ လင်မယားမှာ ဧကပုတ္တ တစ်ဦးတည်းသောသားလေးရှိသည်။ ကိုသင်းမြိုင်က နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ နှစ်တွေ အကြာကြီး အလုပ်လုပ်နေခဲ့သောသူ။ သားတော်မောင် ကျောင်းမနေခင်အရွယ်ကတည်းက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ လှည့်လည်ပြီး အလုပ် လုပ်နေခဲ့ သည်။ တစ်နှစ်ကို နှစ်ခေါက်၊ အနည်းဆုံးတစ်ခေါက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်ပြန်သည်။ အပါတ်စဉ်တိုင်း သားတော်မောင်နှင့် ဖုန်းဆက်သည်။ သားတော်မောင်အလိုရှိရာ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဒီတော့ သားနှင့်အဖေက တစိမ်းဆန်မသွားခဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်ပြန်တိုင်း ကိုသင်းမြိုင်က သားတော်မောင်နှင့်ပလူးပလဲနေသည်။ သားကိစ္စ၊ ၀ိစ္စမှန်သမျှကို ကိုသင်းမြိုင်က လိုက်လံ လုပ်ပေးသည်။ ကျောင်းပို့ ကျောင်းကြိုလုပ်သည်။ ရေချိုးပေးသည်။ အ၀တ်အစားလဲပေးသည်။ ကုန်ကုန်ပြောရလျှင် သားတော်မောင် အိမ် သာ တက်နေသည့်အချိန်မှာပင် အပြင်က ထိုင်စောင့်ပြီး စနောက်နေတတ်သည်။...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၂ နံနက် (၆းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ခရီးစတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး၊ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အစရှိသည့် ကိစ္စအဝဝ တို့အား လုပ်အားဒါန အတူတူ လက်တွဲဖြတ်သန်းသော်လည်း ဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းကြပုံ မတူညီကြ။ ထို့အတူ လောကတွင် နေထိုင်မှုပုံစံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေအထား၊ နေရာအဆင့်အတန်း၊ ခံယူချက်များသည်လည်း ကွဲပြားကြပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ကွဲပြားသော ဘဝခရီးများ ကိုယ်စီ လျှောက်လှမ်းကြပေမယ့် တကယ့်တကယ် အရေးကြုံလာသည့်အခါ ဦးတည်ချက်များ တစ်စုတစ်စည်း၊ တညီတညွှတ်တည်း ဖြစ်လာကြတော့ သည်။ တူညီသော ရည်ရွယ်ချက်တစ်တည်းဖြင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့...
လွှတ်တော်ထဲမှာ “ဒီချုပ်” ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ဗျို့ တူမောင်ညို။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် (ကျနော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျနော် “လွှတ်တော်ထဲမှာ “ဒီချုပ်” ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ” ဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ် အမြင်ဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ် ၊ မိတ်ဆွေများလည်း စိတ်ပါ ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ဝေငှလိုက်ပါတယ်) လွှတ်တော်ထဲမှာ “ဒီချုပ်” ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ဗျို့။ အတော်ပဲဗျာ၊ ကျနော်လည်းအဲဒီအကြောင်းပြောချင်နေတာ။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေ ရက်ပေါင်း ၄၀ ကျင်းပခဲ့တာဗျ။ တိတိကျပြောရမယ်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်း အဝေးက (၁၃) ရက်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်က ရက်ပေါင်း (၄၀) တိတိ စည်းဝေးခဲ့ကြတာပဲ။ ကျနော်ဆွေးနွေးချင်တာနဲ့သိချင်တာကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တွေမှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေ မေးမြန်းပြီး၊ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို အဆိုတင်ခဲ့ကြသလဲ၊ သူတို့မေးခဲ့၊တင်ခဲ့၊ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြတဲ့တွေ ဘယ်လိုရလဒ်ရခဲ့သလဲဆိုတာကို...
သန်းဝင်းလှိုင် စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ သခင်ထွန်းအုပ်၊ သခင်ဗစိန်တို့ဦးစီးသောတို့ဗမာအစည်းအရုံး၌ပါဝင်ခဲ့သော ဗိုလ်စင်္ကြာ၏အမည်ရင်းမှာ သခင်အောင်သန်းဖြစ်သည်။ ဂျပန် စစ်ပညာသင်တန်းတက်စဉ်က ဂျပန်အမည်မှာ ဟီရာတာမာဆာအို (Hirata Masao) ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၌ ရဲဘော်သုံးကျိပ် ဝင်များ ဗိုလ်အမည်ခံယူရာတွင် ဗိုလ်စင်္ကြာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗိုလ်စကြာကို ၁၉၁၅ ဇူလိုင် ၁ ရက် ကြာသာပတေးနေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ အဖဦးမြတ်သာ၊ အမိဒေါ်သန်းတင်တို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်း (၄) ဦးတွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ မွေးချင်းအစ်ကိုများမှာ ဦးသန်းဇံ၊ ဦးသန်းစိန်၊ ဦးမြသန်းတို့ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က ဒိုင်အိုစီဇင် ယောက်ျားလေးအထက်တန်းကျောင်း (Diocesan Boy’s High School) နှင့် ရန်ကုန်စိန်ပေါကျောင်း (အထက ၆ ဗိုလ်တထောင်) တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။...
Page 795 of 832«1...793794795796797...832»
အောင်ဒင် - အမေရိကန်ဆန်ရှင်၊ စီးပွါးရေးကျင့်ဝတ်နှင့့်် မြန်မာ့ခရိုနီများ၊ အပိုင်း (၂)
ရွှေပြည်ကြီးရဲ့ ရင်လေးသတဲ့လား ...
ငြိမ်းချမ်းအေး - အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများနဲ့ မဲဆွယ်မှု
လမ်းဘေးသတင်းထောက် – ဘယ်တော့ ပြောင်းလဲမှာလဲ https://t.co/aONXVCTZKs https://t.co/fbTbBW2Kx5 about 24 minutes ago ReplyRetweetFavorite
ကဗျာဆရာ ကောက်နွယ်ကနောင်ကွယ်လွန်ခြင်း ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း https://t.co/iaQFZJdLBY https://t.co/iddU8oLlQl about4hours ago ReplyRetweetFavorite